အစိုးရ ၀ န်ထမ်း ၆၇ ဦး ကိုဝယ်ယူရန်ဆမ်ဆန်ရေနှင့်မိလ္လာစီမံခန့်ခွဲမှု | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေဂျော့ဘ်အစိုးရ ၀ န်ထမ်း ၆၇ ဦး ကိုဝယ်ယူရန်ဆမ်ဆန်ရေနှင့်မိလ္လာစနစ်
17 / 03 / 2020 ဂျော့ဘ်, အထွေထွေ
SAMSUN ရေနှင့်မိလ္လာစနစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် EP ည့်လမ်းညွှန်ရုံး။
ဆမ်ဆမ်ရေနှင့်မိလ္လာစနစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၌ ၀ န်ထမ်းပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဥပဒေအမှတ် ၆၅၇ အရအလုပ်ခန့်ထားရန်၊ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးများအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ခန့်အပ်ခြင်းအတွက်စာမေးပွဲနှင့်ချိန်းဆိုခြင်းစည်းမျဉ်းများပါပြ္ဌာန်းချက်များအရပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောလစ်လပ်နေရာများတွင်ပွင့်လင်းသောခန့်အပ်မှုများမှတစ်ဆင့်စုဆောင်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ခေါင်းစဉ်၊ အတန်း၊ တန်း၊ နံပါတ်၊ အရည်အချင်း၊ KPSS အမျိုးအစား၊
N ကစားခေါင်းစဉ် အတန်းအစား ကစားသမားဒီဂရီ အပိုင်းအစ အရည်အချင်းများ ကျား, မ KPSS
ပုံစံ KPSS အခြေစိုက်စခန်း
1 အင်ဂျင်နီယာ TH 8 1 ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်မှဘွဲ့ကြိုပညာရေးကိုပံ့ပိုးရန် Male / Female P3 70
2 အင်ဂျင်နီယာ TH 82သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်မှဘွဲ့ကြိုပညာရေးကိုပံ့ပိုးပေးရန် Male / Female P3 70
3 အင်ဂျင်နီယာ TH 83လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်မှဘွဲ့ကြိုပညာရေးကိုပံ့ပိုးရန် Male / Female P3 70
4 အင်ဂျင်နီယာ TH 8 1 ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုအဆင့်ကိုသင်ကြားပေးသောဌာန၏ဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်များမှဘွဲ့ယူရန် Male / Female P3 70
5 အင်ဂျင်နီယာ TH 83ဘွဲ့ကြိုပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသောအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာအစီအစဉ်မှဘွဲ့ရသည် Male / Female P3 70
6 အင်ဂျင်နီယာ TH 85မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုပရိုဂရမ်ကိုဘွဲ့ကြိုအဆင့်အထိသင်ကြားပေးနေသည့်ဘွဲ့ရရှိရန် Male / Female P3 70
7 အင်ဂျင်နီယာ TH 85စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်မှဘွဲ့ကြိုအဆင့်ကိုသင်ကြားပို့ချပေးသောကျောင်းမှဘွဲ့ယူရန် Male / Female P3 70
8 ဗိသုကာ TH 8 1 ဗိသုကာပညာဌာနမှဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ Male / Female P3 70
9 ဓါတုဗေဒဆရာ TH 82ဓာတုဗေဒအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ဌာနခွဲဘွဲ့များ Male / Female P3 70
10 ကျွမ်းကျင်သူ TH 86အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျောင်းများ၏စက်မှုတွဲဖက်အစီအစဉ်မှဘွဲ့ရရန် Male / Female P93 70
11 ကျွမ်းကျင်သူ TH91 အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျောင်းများ၏ Computer Programming တွဲဖက်အစီအစဉ်မှဘွဲ့ရရန် Male / Female P93 70
12 ကျွမ်းကျင်သူ TH91 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းများ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးတွဲဖက်ပါဒီဂရီအစီအစဉ်မှဘွဲ့ရ Male / Female P93 70
13 ကျွမ်းကျင်သူ TH910 အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကျောင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်သို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာတွဲဖက်အစီအစဉ်မှဘွဲ့ယူရန် Male / Female P93 70
14 ကျွမ်းကျင်သူ TH98 အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကျောင်းများမြေပုံပညာရှင်သို့မဟုတ်မြေပုံနှင့် Cadastral တွဲဖက်ဒီဂရီအစီအစဉ်မှဘွဲ့ယူရန် Male / Female P93 70
15 ကျွမ်းကျင်သူ TH93 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းများ၏လျှပ်စစ်တွဲဖက်အစီအစဉ်မှဘွဲ့ရ Male / Female P93 70
16 ကျွမ်းကျင်သူ TH92 အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကျောင်းများအီလက်ထရောနစ်၊ လျှပ်စစ် - အီလက်ထရောနစ်ပညာရှင်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာတွဲဖက်ဘွဲ့အစီအစဉ်မှဘွဲ့ယူရန် Male / Female P93 70
17 စုဆောင်း GPP9- 10 -11 11 စီးပွားရေး၊ စာရင်းကိုင်၊ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘဏ္Financeာရေး၊ စာရင်းကိုင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ၏ဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Male / Female P3 70
18 ရှေ့နေ AH72 တက္ကသိုလ်ဥပဒေဌာနများမှဘွဲ့ရသည် Male / Female P3 70
ခန့်အပ်ထားသောအစိုးရ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ရန်လျှောက်ထားသူများသည်နိုင်ငံ့ ၀ န်ထမ်းဥပဒေဥပဒေ ၆၅၇၊ အပိုဒ် ၄၈၊ အပိုဒ် (က) တွင်ဖော်ပြထားသောယေဘူယျအခြေအနေများရှိရမည်။
(ဂ) တူရကီရာဇ ၀ တ်မှုပုဒ်မ ၅၃ တွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်ကာလများကုန်ဆုံးလျှင်ပင်၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှု၊ လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူ၊ မသမာမှု၊ ထောင်ဒဏ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်ထက် ကျော်လွန်၍ တမင်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရလျှင်၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ လေလံဆွဲခြင်းတွင်မကောင်းသောအကြံအစည်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မကောင်းမှုများ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်မှောင်ခိုပစ္စည်းများခ ၀ ါချခြင်း၊
()) အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်စစ်တပ်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ စစ်မှုထမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသို့မဟုတ်စစ်မှုထမ်းသက်သက်အသက်မပြည့်သေးလျှင်၊ သူသည်စစ်မှုထမ်းသက်သက်ရောက်လျှင်သူသည်တက်ကြွသောစစ်မှုထမ်းခြင်းတွင်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားသည့်အတန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံရခြင်း၊
ဆ) ၀ န်ထမ်းများလျှောက်ထားသောအကြောင်းအသနားခံလွှာ (လျှောက်ထားသူတစ် ဦး စီသည်မိမိတို့၏ပညာရေးအဆင့်အတန်းအရတင်ထားသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဦး ကိုသာလျှောက်ထားမည်။ )
က) ကြေငြာသည့်ဘွဲ့များအတွက်နောက်ဆုံးဘွဲ့လွန်ကျောင်းမှပညာရေးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ဝယ်ယူမည့်ခေါင်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ ပြည်သူ့ ၀ န်ထမ်းရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲ (KPSS) တွင်သတ်မှတ်ထားသောရမှတ်များမှအနည်းဆုံး KPSS ရမှတ်ရရှိရန်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှလျှောက်လွှာ http://www.saski.gov.tr အင်တာနက်လိပ်စာမှထောက်ပံ့လိမ့်မည်
ခ) E-Government မှတစ်ဆင့်ရရှိမည့်ဒီပလိုမာသို့မဟုတ်ဘွဲ့လက်မှတ်၏မူရင်းသို့မဟုတ် notary အသိအမှတ်ပြုမိတ္တူ၊ သို့မဟုတ်ဘားကုဒ်ပါသောဘွဲ့လက်မှတ် (မူရင်းကိုတင်ပြလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ )
(ဂ) နိုင်ငံခြားကျောင်းမှဘွဲ့ရသူများအတွက်တူညီသောစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူမူရင်းသို့မဟုတ် notarized မူရင်း (မူရင်းကိုတင်ပြပါကကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ )
d) KPSS ရလဒ်စာရွက်စာတမ်း၏ÖSYMဝက်ဘ်ဆိုက်မှဘားကုဒ်ကွန်ပျူတာ print ထုတ်ခြင်း၊
(စ) မိမိတာ ၀ န်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ရန်အဟန့်အတားမရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်း၊
ဆ) ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတ်ပုံ ၄ ပုံ၊ (ပုံစံ ၁ ကိုပူးတွဲပါလိမ့်မည်)
(ဇ) ရှေ့နေလိုင်စင်သို့မဟုတ်ရှေ့နေ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ထောက်ခံစာမိတ္တူမူရင်း (မိတ္တူကိုမူရင်းကိုတင်ပြလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ )
ဈ) မည်သည့် ၀ န်ထမ်းကိုလျှောက်ထားကြောင်းတောင်းခံခြင်း၊
4- လျှောက်လွှာနေရာ, နေ့စွဲ, နည်းလမ်းနှင့်ကာလ
က) လျှောက်ထားသူများသည်လျှောက်လွှာတင်စဉ်အတွင်းတောင်းဆိုထားသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ 06.04.2020 ကနေ 17.04.2020 မှသောကြာနေ့ 17.00 အထိ (အလုပ်ချိန်ရက် ၈း၀၀ မှ ၁၇း၀၀ အတွင်း) လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
- အီလက်ထရောနစ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန http://www.saski.gov.tr အင်တာနက်လိပ်စာ,
- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောစာဖြင့်သော်လည်းကောင်းသူတို့သည် Samun ရေနှင့်မိလ္လာစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်ပညာရေးညွှန်ကြားမှုကိုပေးပို့နိုင်သည် (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4Atakum / Samsun) ။ (ကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှနှောင့်နှေးသောစာများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ )
ခ) သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများပျောက်ဆုံးနေသောသို့မဟုတ်သူတို့၏အရည်အချင်းများနှင့်မကိုက်ညီသောလျှောက်လွှာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှအကဲဖြတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
5 - လျှောက်လွှာများ၏တန်ဖိုး - လျှောက်လွှာ၏ကြေငြာချက်
(က) ကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ TR မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်ÖSYMမှတ်တမ်းများ၏ကိုက်ညီမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးရထားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းမှ စ၍ ခန့်အပ်မည့်လစ်လပ်ရာထူးအရေအတွက်ငါးဆနှုန်းဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူအားနှုတ်စာမေးပွဲတွင်ဖိတ်ကြားခံရမည်။
(ဂ) နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲနှင့် KPSS ရမှတ်များနှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေရာနှင့်အချိန်ရထိုက်သူများ တနင်္လာနေ့, 20.04.2020 ကျွန်ုပ်တို့၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန http://www.saski.gov.tr အင်တာနက်ပေါ်မှာကြေညာလိမ့်မယ်
()) လျှောက်လွှာကိုလက်ခံပြီးစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျှောက်ထားသူများ၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေရာနှင့်နေ့ရက်တို့ကိုရရှိနိုင်ပါသည် “ စာမေးပွဲဝင်စာရွက်စာတမ်းများ” သူတို့သည် www.saski.gov.tr ​​အင်တာနက်လိပ်စာမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၆။ စာမေးပွဲ၊ အချိန်နှင့်ခေါင်းစဉ်များ
ဆမ်ဆန်အသေးစားနှင့်မိလ္လာစီမံခန့်ခွဲမှုအထွေထွေအစည်းအဝေးအသေးစားအစည်းအဝေးခန်းမ (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4Atakum / SAMSUN) တွင်; စုဆောင်းမှုအဘို့ 27/04/2020-08/05/2020 နေ့ရက်များအကြားနှုတ်စာမေးပွဲကျင်းပလိမ့်မည်။ နှုတ်ဖြင့်စာမေးပွဲကိုတစ်နေ့တည်းတွင်မပြီးဆုံးနိုင်ပါက၊ နောက်တစ်နေ့တွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လက်တွေ့ကျသောဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုတိုင်းတာသည်။
စာမေးပွဲအတွက်အကဲဖြတ်; အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်များအတွက်တူရကီ, Ataturk ရဲ့အခြေခံမူများနှင့်တော်လှန်ရေးသမိုင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ, 657 ဥပဒေ, ဒေသခံအစိုးရ 15, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လက်တွေ့အသိပညာအဘို့အစဉ်အဖွဲ့သည်ခေါင်းစဉ်နဲ့ 40 မှတ်စုစုပေါင်း 100 မှတ်ကျော်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာရန်။ စာမေးပွဲတွင်အောင်မြင်ရန်အတွက်စာမေးပွဲဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များမှပေးသောဂဏန်းသင်္ချာပျှမ်းမျှသည်အနည်းဆုံး ၆၀ ဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အဓိကအောင်မြင်မှုရမှတ်; ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်မှုမှပြုလုပ်သောနှုတ်ဖြေစာမေးပွဲအမှတ်နှင့် KPSS ရမှတ်တို့၏တွက်ချက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်မှဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အောင်မြင်မှုရမှတ်များအတူတူဖြစ်ပါက KPSS ရမှတ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုရမှတ်မှ စတင်၍ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်နှင့်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်နှင့်အစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်။ အဓိကနှင့်အရံကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းများကိုအုပ်ချုပ်ရေး၏အင်တာနက်လိပ်စာတွင်ကြေငြာမည်ဖြစ်ပြီး၊ စာရင်းသွင်းသူများအားစာဖြင့်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွင်းမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အမှန်တရားကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုဖုံးကွယ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိသူများ၏စာမေးပွဲများသည်မမှန်ကန်ဟုယူဆပြီးသူတို့၏တာ ၀ န်များကိုမပြုလုပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအမှုများကိုခန့်အပ်ခြင်းများကိုဆုံးဖြတ်ထားသည့်တိုင်သူတို့၏တာ ၀ န်များကိုဖျက်သိမ်းသည်။ သူတို့သည်မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှတောင်းဆိုခြင်းမပြုနိုင်။ အစိုးရရှေ့နေချုပ်အားရာဇ ၀ တ်မှုတိုင်ကြားချက်ကိုတင်သွင်းလိမ့်မည်။
စာမေးပွဲရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအောင်မြင်မှုစာရင်းကြေငြာပြီးခုနစ်ရက်အတွင်းစာဖြင့်ရေးသားနိုင်သည်။ အယူခံဝင်မှုကိုစာမေးပွဲဘုတ်အဖွဲ့မှ ၇ ရက်အတွင်းအဆုံးသတ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်အားစာဖြင့်အကြောင်းကြားပါမည်။
တင်ဒါကြေငြာချက် - မိလ္လာစနစ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်း (TCDD4တိုင်းဒေသကြီး ဦး စီးဌာန Sivas Loko …
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - မိုးရေ၊ မိလ္လာ၊ သောက်သုံးရေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရှုခင်းများ…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မိလ္လာအလုပ် (Haydarpaşaဆိပ်ကမ်း) ပြုမိပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မိလ္လာသူ Work Yaptırılacaktır
Izmir ရှိ Mass Transportation အတွက် Coronavirus ချိန်ညှိခြင်း! BZBAN၊ ဘတ်စ်ကား၊ ထရမ်နှင့်ကူးတို့သင်္ဘောပြောင်းသွားသည်